Madaxweyne Erdogaan oo Tacsi u Diray Madaxweynaha Israaiil
HomeWararka MaantaMadaxweyne Erdogaan oo Tacsi u Diray Madaxweynaha Israaiil
January 15, 2022 Wararka Maanta, Wararka Caalamka 0
Madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Dayib Erdogan ayaa tacsi u diray madaxweynaha maamulka Israa’iil Isaac Herzog , oo hooyadiis dhawaan geeriyootay, waxa uuna la qeyb saday xanuunka geerida ku timid hooyada Isaac .
Erdogan oo telfoon kula hadlay Madaxweynaha Israa’iil ayaa uga tacsiyadeeyay geerida ku timid hooyadiis, waxa uuna u sheegay in ay la wadaagayaan murugada uu dareemayo ee ka dhalatay geerida hooyadiis.
“Anigoo si wanaagsan u og in aanay cidna buuxin karin booska hooyo, waxaana si kal iyo laab ah kuula qeybsanayaa murugada, tacsi ayaanba kaaga wadaa qarankeyga,” ayuu Erdogan u sheegay madaxweynaha Isra’iil.
Madaxweynaha dalka Turkiga ayaa marar badan cambaareeyay maamulka Israa’iil iyo hogaankooda, hasa ahaatee Madaxweyne Erdogan ayaa mudooyinkii dambe waday dedaalo lagu hagaajinayo xiriirka kala dhaxeeya Israa’iil oo meel xun gaaray.
Dowlada Soomaaliya iyo Dowlada venzuela oo iskaashi Faaida Wadaag ah Yelaanaaya